Home Breaking News आज नेकपा सचिवालय बैठक
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक बस्दैछ। पूर्वनिर्धारित सहमतिअनुसार बैठक आज बुधबार बस्न लागेको हो । यद्यपि यस अवधिमा विविध राजनीतिक प्रतिक्रिया आएकाले बैठक नबस्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजको बैठक सार्न खोजेको बुझिएको छ भने प्रचण्ड बैठक गर्ने पक्षमा छन्।
सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हिजो भेट्न शीतल निवासमा भेटेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भेटेको बाहिरिएको केही घण्टामै ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता
नेकपाभित्र विवाद बढिरहेको बेला प्रचण्ड र ओली पालैपालो शीतल निवास पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिकएको छ ।
अर्थ राजधानी समाचारदाता - January 9, 2021
काठमाडौँ । महिला किसानले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई ४१ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रांगारिक कृषि उत्पादन अभियान नेपाल र...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत्...
ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव !
Editor-Picks एजेन्सी - January 11, 2021
लन्डन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध कंगे्रसमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । महाअभियोगको प्रस्तावमा २ सय बढी डेमोक्रेट सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्...
कोरोना भाइरसबाट भारतमा एकैदिनमा २ हजारको मृत्यु
एजेन्सी - June 17, 2020
नयाँदिल्ली । भारतमा २४ घण्टाभित्र कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएकाहरुको संख्या एक्कासी बढेको छ । अघिल्ला दिनहरुमा मृत्यु हुनेहरुको विवरण सयको संख्यामा आउने गरेकोमा बुधबार हजारको...
मनसुनपछि बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु, ४६ जना बेपत्ता
रासस - July 13, 2020
काठमाडौँ । सरकारले यस वर्षको मनसुन शुरु भएयता बाढी र पहिरोमा परी ८५ जनाको मृत्यु हुनका साथै ४६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको छ...
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - September 4, 2020
एसियाली बजारमा तेलको मूल्यमा पुनः गिरावट
Editor-Picks एजेन्सी - April 20, 2020
हङकङ । इन्धन भण्डारणको समस्या आएसँगै एसियाली बजारमा तेलको मूल्यमा सोमबार भारी गिरावट आएको छ । तेलको मूल्यमा विगत दुई दशकयताकै यो...
समुदायमा कोरोना देखिएपछि लमजुङको ५ वडामा निषेधाज्ञा
प्रदेश ४ नवराज पहाडी - August 14, 2020
लमजुङ । लमजुङमा समुदायमा संक्रमण देखिएपछि जिल्ला प्रशासनले पाँच वडामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका– ५, ६, ७, ८ र ९...
५१ वर्षमा लागे अजय देवगन
कला एजेन्सी - April 3, 2020
मुम्बई । बलिउड अभिनेता अजय देवगन बिहीबारबाट ५१ वर्षमा लागेका छन् । उनले आफ्नो जन्म दिन बिहीबार घरमै परिवारसँग मनाएका छन् ।...
Breaking News एम के माझी - June 16, 2020
दीर्घराज प्रसाईं - January 11, 2021
एकप्रति फाेटाेकपी गरेकाे चालीस रुपैयाँ
यो पनि पढ्नुहोस नेकपामा दुवै समूहका फरक फरक रणनीति